မိတ်ဆွေတချို့ရဲ့ ရှောင်ဖယ်မှုကို ရင် ဆိုင် လိုက်ရတာမို့ စိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်မိတယ်လို့ ဆိုလာတဲ့ ဦးကျော်သက်လင်း – Cele Lover
မိတ်ဆွေတချို့ရဲ့ ရှောင်ဖယ်မှုကို ရင် ဆိုင် လိုက်ရတာမို့ စိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်မိတယ်လို့ ဆိုလာတဲ့ ဦးကျော်သက်လင်း
ကိုယ်က မလွှဲသာတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့် ထွက်ခွာ လာခဲ့ရပေမယ့် မိတ်ဆွေတချို့ရဲ့ ရှောင်ဖယ်မှုကို ရင် ဆိုင် လိုက်ရတာမို့ စိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်မိတယ်လို့ ဆိုလာတဲ့ ဦးကျော်သက်လင်း
“ကျန်းမာတော်မူကြပါစ ခင်ဗျာ” လို့ ည၈နာရီသတင်းမှာ ငယ်စဉ်ကတည်းက နေ့စဉ်မြင်တွေ့နေကျဖြစ်တဲ့ MRTV ဝါရင့်သတင်းကြေ ငြာသူ ဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးကျော်သက်လင်း ဟာလက်ရှိမှာ လွတ်မြောက် နယ်မြေမှာရောက်ရှိနေပါတယ်။ ဦ‌းကျော်သက်လင်း ဟာ ‌အာဏာစ တင် သိမ်းတဲ့နေ့ကစပြီး အစောဆုံး CDM ပြုလုပ်ခဲ့သူတစ်ဦးလဲဖြစ်ပါတယ်။ လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာ
ခက်ခက်ခဲခဲနေထိုင်နေရတဲ့ ဦးကျော်သက်လင်း ဟာ ယခင်ကပုံစံနဲ့ လက်ရှိအခြေအနေက အရမ်းကိုကွာခြားနေတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေကို ထုတ် ပြလိုက်ခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေက အံ့သြခဲ့ကြရပါသေးတယ်။ ဦးကျော်သက်လင်း ဟာအသိမိတ်ဆွေအချို့ရဲ့ ရှောင်ဖယ်မှု့ကို လိုက် ရတာကြောင့် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါတယ်။
” သတ္တဝါတိုင်းဟာ ဘယ်လောက်ပဲသေးငယ်တဲ့အကောင်လေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကိုအန္တရာယ်ပေးလာရင်… ဥပမာ-ခြင်လေးယင်လေး တကောင်ကို လွယ်လွယ်ဖမ်းလို့သတ်လို့မရပါဘူး။ ရိုက်ဖို့ချိန်လိုက်တာနဲ့ပျံသန်းလွတ်မြောက်သွားတာများတာပါပဲ။ ကျနော်တို့လည်း လွတ် မြောက်ဖို့အတွက် တစ်နေရာကိုစွန့်ခွါရပါတယ်။ စွန့်ချင်ခွါချင်လို့တော့ ဘယ်ဟုတ်ပါ့မလည်း။
ဒါပေမယ့် ကိုယ်က အန္တရာယ်ကြောင့်စွန့်ခွာရတဲ့အခါ မြို့ပြကလူတွေကလည်း သူတို့ရပ်တည်မှုကိုထိခိုက်လာမှာကြောင့် ကျနော့်ကိုပြန် ခွာလာကြတယ်။ ကျနော်ခန္ဓာကသာ သူတို့နားကခွာခဲ့ရပေမယ့် သူတို့က စိတ်ရောကိုယ်ပါ စွန့်ပစ်ဖယ်ခွာသွားကြတဲ့အခါ…. တောထဲမှာပဲ ချေးမဖောက် အကြေးခွံမခွာပဲ ငါးကင်စားလိုက်တာကောင်းပါတယ်ဗျာ….ဟိုးအရင်နေ့များကဖြစ်သည်။ ” လို့ ဦးကျော်သက်လင်း က သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်အကောင့်မှာ ရေးသားထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
သတင်းတင်ဆက်သူ ဦးကျော်သက်လင်း ရေးသားထာတဲ့ စာသားလေးတွေကို ဖတ်ပြီးပရိသတ်တွေက စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြပါတယ်။ လွတ်မြောက်နယ်မြေကိုရောက်ရှိနေတဲ့ ဉီးကျော်သက်လင်း အတွက်လဲဘေးကင်းကျန်းမာပါစေလို့လဲ ဆုတောင်းပေးထားကြပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကြီးအာဏာရှင်ဘေးမှ အမြန်ဆုံးကင်းလွတ်ပြီး လိုချင်နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီကိုအမြန်ဆုံးရရှိနိုင်ပါစေ။
ကိုယ္က မလႊဲသာတဲ့အေၾကာင္းတရားေၾကာင့္ ထြက္ခြာ လာခဲ့ရေပမယ့္ မိတ္ေဆြတခ်ိဳ႕ရဲ႕ ေရွာင္ဖယ္မႈကို ရင္ ဆိုင္ လိုက္ရတာမို႔ စိတ္မေကာင္းေတာ့ျဖစ္မိတယ္လို႔ ဆိုလာတဲ့ ဦးေက်ာ္သက္လင္း
“က်န္းမာေတာ္မူၾကပါစ ခင္ဗ်ာ” လို႔ ည၈နာရီသတင္းမွာ ငယ္စဥ္ကတည္းက ေန႔စဥ္ျမင္ေတြ႕ေနက်ျဖစ္တဲ့ MRTV ဝါရင့္သတင္းေၾက ျငာသူ ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးေက်ာ္သက္လင္း ဟာလက္ရွိမွာ လြတ္ေျမာက္ နယ္ေျမမွာေရာက္ရွိေနပါတယ္။ ဦ‌းေက်ာ္သက္လင္း ဟာ ‌အာဏာစ တင္ သိမ္းတဲ့ေန႔ကစၿပီး အေစာဆုံး CDM ျပဳလုပ္ခဲ့သူတစ္ဦးလဲျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမမွာ
ခက္ခက္ခဲခဲေနထိုင္ေနရတဲ့ ဦးေက်ာ္သက္လင္း ဟာ ယခင္ကပုံစံနဲ႔ လက္ရွိအေျခအေနက အရမ္းကိုကြာျခားေနတဲ့ ဓာတ္ပုံေလးေတြကို ထုတ္ ျပလိုက္ခဲ့တာေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြက အံ့ၾသခဲ့ၾကရပါေသးတယ္။ ဦးေက်ာ္သက္လင္း ဟာအသိမိတ္ေဆြအခ်ိဳ႕ရဲ႕ ေရွာင္ဖယ္မႈ႕ကို လိုက္ ရတာေၾကာင့္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနပါတယ္။
” သတၱဝါတိုင္းဟာ ဘယ္ေလာက္ပဲေသးငယ္တဲ့အေကာင္ေလးေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္ကိုအႏၲရာယ္ေပးလာရင္… ဥပမာ-ျခင္ေလးယင္ေလး တေကာင္ကို လြယ္လြယ္ဖမ္းလို႔သတ္လို႔မရပါဘူး။ ႐ိုက္ဖို႔ခ်ိန္လိုက္တာနဲ႔ပ်ံသန္းလြတ္ေျမာက္သြားတာမ်ားတာပါပဲ။ က်ေနာ္တို႔လည္း လြတ္ ေျမာက္ဖို႔အတြက္ တစ္ေနရာကိုစြန႔္ခြါရပါတယ္။ စြန႔္ခ်င္ခြါခ်င္လို႔ေတာ့ ဘယ္ဟုတ္ပါ့မလည္း။
ဒါေပမယ့္ ကိုယ္က အႏၲရာယ္ေၾကာင့္စြန႔္ခြာရတဲ့အခါ ၿမိဳ႕ျပကလူေတြကလည္း သူတို႔ရပ္တည္မႈကိုထိခိုက္လာမွာေၾကာင့္ က်ေနာ့္ကိုျပန္ ခြာလာၾကတယ္။ က်ေနာ္ခႏၶာကသာ သူတို႔နားကခြာခဲ့ရေပမယ့္ သူတို႔က စိတ္ေရာကိုယ္ပါ စြန႔္ပစ္ဖယ္ခြာသြားၾကတဲ့အခါ…. ေတာထဲမွာပဲ ေခ်းမေဖာက္ အေၾကးခြံမခြာပဲ ငါးကင္စားလိုက္တာေကာင္းပါတယ္ဗ်ာ….ဟိုးအရင္ေန႔မ်ားကျဖစ္သည္။ ” လို႔ ဦးေက်ာ္သက္လင္း က သူ႔ရဲ႕ေဖ့ဘြတ္အေကာင့္မွာ ေရးသားထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
သတင္းတင္ဆက္သူ ဦးေက်ာ္သက္လင္း ေရးသားထာတဲ့ စာသားေလးေတြကို ဖတ္ၿပီးပရိသတ္ေတြက စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမကိုေရာက္ရွိေနတဲ့ ဉီးေက်ာ္သက္လင္း အတြက္လဲေဘးကင္းက်န္းမာပါေစလို႔လဲ ဆုေတာင္းေပးထားၾကပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ႀကီးအာဏာရွင္ေဘးမွ အျမန္ဆုံးကင္းလြတ္ၿပီး လိုခ်င္ေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီကိုအျမန္ဆုံးရရွိႏိုင္ပါေစ။
Previous Article နိုင်ငံအချင်းချင်း မိတ်မပျက်ချင်တာကြောင့် ပြစ်ဒဏ်ကနေ ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တာလို့ စစ်ကောင်စီပြော
Next Article ကိုယ်တို့ ပြည်သူတွေ ညီချက်ကို ပြောပြလာတဲ့ ပန်ဆယ်လို